April 26, 2020 3099
लामो समय देखि सरकार’ले गरेको लकडाउ’नका कारण सर्व’साधारण मर्कामा परेका छन् । दिनहुँ कमाएर खानेहरु बेखर्ची भएर पैदलै सयौं किलोमिटरको दुरी पार गरेर घर पुग्न भन्दै हिडे’का छन् । पैदल हिडेकाहरुको पनि बाटोमा खान नपाएर बिच’ल्ली भएको छ ।
साना बालबालिका बोकेर हिडे’काहरुको बिजोग अवस्था’को तस्बिर सार्वजनिक भएको छ । यस्तो अवस्थामा काठमाडौंमा विभिन्न क्षेत्रका ब्यक्ति सहयोग’का लागि बाहिर निस्केका छन् । सरकार’ले पनि राहत वितरण गरिरहेको जनाएको छ । तर त्यो राहत वास्तविक’ले पाउन नसकेको समाचार पनि आइरहेका’ छन् ।
कलाकार, ब्यवसायी र केही सामाजिक अभियन्ता अहि’ले राहत र सहयोग जुटाउने काममा लागेका छन् । केहीले स्थानिय तहसंग समन्वय गरेर राहत वितरण गरिरहे’का छन् भने केहीले आफैले विपन्न’लाई राहत दिइरहेका छन् ।
यसैबिच एविसी टेलिभिजन’वाट प्रसारण हुने कार्यक्रम इन्द्रेणीका सञ्चालक कृष्ण कँडेल पनि सहयोगका लागि सडकमा छन् । इन्द्रेणी फुडल्याण्डका अगाडी राहत दिन भन्दै निस्किएका उनका अगाडी हजारौंको भिड छ । उनको कार्यक्रम इन्द्रेणी’मा विदेशमा बस्ने नेपालीह’रुले विपन्न र अप्ठेरोमा परेकाहरुलाई सहयोगका लागि पैसा पठाउने गर्छन ।
विदेशमा बस्ने नेपालीले पठाएको रकमवा’ट उपचार नपाए’का हजारौं नागरिकले उपचार पाएका छन्, विपन्नलाई राहत मिलेको छ धेरैले नयाँ जिवन पाएका छन् । अहिले लकडाउनका कारण अप्ठेरोमा परेकाहरुलाई सहयोग दिनु भन्दै विदेशमा बसेका नेपालीले पठाएको रकमवा’ट कृष्णले राहत वितरण गरि’हरका छन् ।
यस्तोमा उनले राहत वितरण गर्ने स्थानमा आएका कतिपय वास्तविक विपन्न नभएर सम्पन्न पनि आएको देखेपछि कृष्ण’ले त्यस्तालाई वाटोमै उठवस गराउँदै आइन्दा यस्तो गल्ती नगर्न बाचा गराइरहेका छन् । कतिपय त एक पटक राहत लिएर गएका पनि फेरी आएको पनि देखिए’को छ ।
त्यस्तालाई माक्स खोल्न लगाए’र माफि माग्न लगाएका छन् । कुनै परिवार यस्तो पनि देखियोकी जसमा परिवारका सवै सद’स्य राहत लिने लाइनमा लागेका छन् । त्यस्तालाई पनि उनले सबै’को सामुन्ने माफि माग्न लगाएर उठबस गराए’का छन् । हेर्नुहोस् भिडियो
Prevवैशाख २५ गते’सम्म लकडाउन गर्ने सरकार’को निर्णय
Nextअमेरिकन आइडल’मा दिवेश’लाई जिताउन अपिल, यसरी गर्न सकिन्छ भाेट ! (हेर्नुहोस्)
१० करोड क्षतिपूर्ति माग गर्दै भुवन केसीले साम्राज्ञी विरुद्ध दायर गरे मुद्दा…
टिकटकमा भाइ`रल बनिन् असाध्यै बोल्ड भेटेरि`नरी डाक्टर प्रियंका ढकाल ! (भिडियो`सहित)